Qayb 4aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim – Rasaasa News
Jul 22, 2009 Jwxo-shiil, Ogaden
waxaa su,aalo badan na soo weydiiyey dadka akhrista bogga rasaas.com, hadaba waxaan soo qaadanay maanta su,aal isku mid ah oo ay na soo weydiiyeen dhawr akhriste, su,aashu waxaa ay ku saabsan tahay eray bixinta kuwa halganka duminaya ee uu ugu horeeyo Jwxo-shiil.
Walal waan idin salaamaynaa, waxaanan aad u jeclaystay qoraalada qiimaha badan ee aad u soo qortaan, waxaa aad ii xiisa galiya sida buuxda ee aad u sharaxdaan qodobada aad qortaan, waxa ay doonaanba ha ahaadaane, walo ay jiraan qoraal aanan anigu jeclaysan.
Waxaad aad wax uga qortaan ninka aad ugu yeedheen Jwxo-shiil iyo waliba koox aad ugu yeedheen in ay safka dambe yihiin oo ay isga la shaqeeyaan, waxaadna sheegtaan xumaatooyin badan oo uu halganka ku sameeyey oo ayna dadku ogayn. Waxaa kale oo aan qoraaladiina ku arkay in aad wax ka sheegtaan Itobiya iyo Kilalka 5aad.
Waxaadna iila muuqataan in aad dhinacyo badan oo wanaaga ah aad danaynaysaan.
Marka su,aashaydu waxaa weeye Maxaad doonaysaan, yaad u ololaysaan, yaadse taageertaan siyaasadiisa?
Su,aashuna waxaa ay u qoran tahay sidan;
Mahadsanid akhristow waxaanu su,aalahaaga u gudbinay in uu ka jawaabo H. Magan oo ka mid ah qoraayada bogga rasaas.com
Mahad waxaa leh Eebe Weyne, wanaagna ruuxuu siiyo, aniguna waxaan isku dayayaa in aan kuu siiyo jawaabtu sida ay ila tahay. Tan iyo intii uu bilowday kacaanka farsamada ee hal qoy ka dhigay aduunka[Internet Technology], waxaa ka oob baxay uumiyaha aduunka qolabka in ay joogtaba. Teena Somalida gaar ahaana Somalida Ogadeeniya waxaa daahfurmay dhibaato weyn oo ay qabeen dadkeenu, waxaana daalacay iftiin.
Inftiinkaas daalacay hadii aan sida ugu haboon ee faa,iidada u leh dadkeena looga faa,iidaysanin waxaa dhici karta in Iftiinku uu indha tiro dadweynah.
Dhulka Somalida Ogadeniya waa dhul ay aad u dambayso noloshu dhinac walba oo laga dhawro, hadii la isweydiiyo yaa masuul ka ah dhibaatada dib u dhaca waxaa laga yaabaa in ay dadku bixiyaan jawaabo badan, aniguse waxaan u malaynayaa in ay ugu wacan tahay dawlada Itobiya iyo dadkeena oo ay aqoontu ku yar tahay.
Hadaba intii uu yimid iftiinka kacaanka Internet-ka waxaa gabalkeena u soo koradhay isbedel xoog leh oo ah in dhibaatadii ka dhacda dhulkeena inta badan la ogaado, xitaa hadii ay dadladu qari is tidhaahdo, sababtuna waxaa weeye waxaa furmay bogaga badan oo jecel in la helo wararka dhulka Somalida Ogadeeniya.
Hadaba, boggagaas qaarba si ayey wax u qoraan oo ay wararka u gudbiyaan, qaarbaa waxaa ay raacsan yihiin ururka ONLF, qaarna waxay raacsan yihiin Kilalka 5aad, qaar waxay raacsan yihiin JXSG, qaar waxay raacsan yihiin ururada kale ee dhulka Somalida Ogadeeniya ka dagaalama, qaar intaasba shaqo kuma leh oo waxay ka sheekeeyaan mashaariic ka socda gabalada qaar. Kuligood Boggaga Internet-ka ee dhulka Somalida Ogadeeniya way is canjilaan, marka laga eego qaab dhismeedkooda iyo siiqada ay wax u qoraan.
Hadaan u soo noqdo su,aasha jawaabta akhristaha, waxaanu doonaynaa nabad iyo horumar uu dadweynaha Somalida Ogadeeniya helo, si jiilasha dabe ay u noqdaan kuwo wax la qaybsada jiilalka, Dariska, Qaarada iyo Aduun weynahaba. Nabadu waa furaha nolosha, nabad la,aana waa furaha nolol la,aanta. Aqoontuna waa furaha horumarka, aqoon la,aantu waa furaha horumar la,aanta.
Erayada tuducda kor waxay u baahan yihiin faahfaahin, waxaanse filayaa in ay qancinayaan su,aasha nala waydiiyey jawaab ahaan.
Su,aasha Jawaabta labaad, waxaan filayaa boggaga Internet-ka kolka la furayo waxaa loo furaa ujeedooyo, ujeedada waxaa lagu qoraa bogga laftigiisa, hadiibase aa ku qancin wayday erayada afka Ingriiska ku qoran ee bogga. Waxaanu u ololaynaa dadweynaha wanaaga dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxaanuna sheegi cid alaale cidii u gaysata dhibaato, waxaa kale oo aanu u ololaynaa horumarka dadweynaha, iyo waliba dhinacyada u baahan in wax laga wax laga qabto.
Waxaanu dhan ka nahay dulmiga iyo waxyeelooyinka ka jira geeska afrika gaar ahaan kuwa Somalida Ogadeeniya, cid alale cidii aanu is leenahay dhibaato ayey ku hayaan danaha dadweynaha waxaanu u soo jeedinaa in ay arimahaas ka daayaan umahad, waana waajib na saaran in aanu sheegno cida ay doonaanba ha noqdaane.
Su,aasha ugu dambaysa Jawaabteedu, waxaa weeye wariyeyaalku waxaa ay qoraan oo kaliya waxyaabaha ay dadweynuhu afka ka sheegaan, waxaa kale oo wariyeyaalka saaran xil wadaninimo. Waxaa uu wariyuhu jecel yahay oo uu had iyo jeerba taageeraa wax dadweynaha iyo dalaba u roon, iyaga oo gudanaya xilka wariyenimo oo ah hawl culus. Dadka qora boggaga Internet-ka waxaa weeye dad u shaqeeya iskaa oo ma ay jirto cid lacag ku siisa shaqada xooga leh ee ay ummada u qabanayaan, hadaba kolba hadii ay arintu sidaas tahay ma jiraan cid gaar ah oo aanu taageero u hayno oo aan ka ahayn dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo wanaagooda.
Waxaan filayaa in aad ka qanacday su,aalaha aad na soo weydiisay, hadii ayna sidaas ahayn soo celi su,aalaha mar kale.
Kooxda Jwxo-shiil, oo Dabo Galis u Noqotay Mucaaradka Itobiya